ကမ်ဘာပျေါတှငျ 8 သြဇာအရှိဆုံးလိင်မူးယစ်ဆေး Powder | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/လိင်မူးယစ်ဆေး Powder/ကမ်ဘာပျေါတှငျ 8 သြဇာအရှိဆုံးလိင်မူးယစ်ဆေး Powder
အပေါ် Posted 08 / 29 / 2018 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် လိင်မူးယစ်ဆေး Powder.
လိင်စိတ်၏တစ်ဦးကအရှုံး, အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, စိတ်ဖိစီးမှု, အသက်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကြောင့်များသောအားဖြင့်တစ်ဘုံပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အလိုဆန္ဒကိုနှိုးဆှဖို့, ဒီတိုးမြှင့်ဖို့အသုံးပြုကြသည်လိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများရှိပါတယ်။
1998 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဥရောပများ၏အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA ကနှင့် EFSA) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်အာရုံခံစားမှုဖြစ်ပေါ်စေသော) (Viagra ၏စျေးကွက်ကုသမှုများအတွက်ပညာရေးအတည်ပြုခဲ့သည်။ sildenafil citrate 171599-83-0 ၏လက်တွေ့ရလဒ်များထိပ်တန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်ရဲ့နေကြသည်။
Tadalafil (171596-29-5), erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ tadalafil လက်ရှိတွင်ကုန်သွယ်ရေးနာမကိုအမှီ Cialis အောက်မှာတက်ဘလက်အဖြစ်စျေးကွက်ဟာ vasodilator နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်, ကို disable များအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အင်ဇိုင်း phosphodiesterase type ကို5(PDE-5) ဟန့်တားနေတဲ့မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစမကြာသေးမီကအဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောသွေးတိုးရောဂါ၏ကုသမှုများအတွက်အတည်ပြုခဲ့ပြီး, နှင့်အခြားအခြေအနေများအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုး၏ 5mg, 10mg နှင့် 20mg ၏ Cialis ၏တက်ဘလက်များ, ရုပ်ရှင်နဲ့ဗာဒံသီး၏ပုံစံအတွက်ဖုံးလွှမ်းအဝါရောင်အရောင်များ၏ဖြစ်ကြသည်။ အဆုတ်သွေးတိုးရောဂါများအတွက်အတည်ပြုထိုး 20 မီလီဂရမ်နှင့်အမှတ်တံဆိပ် Adcirca အောက်မှာစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့လေ့လာမှုများ tadalafil နိုက်ထရိတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ antihypertensive အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်မပြသခဲ့ကြသည်။ ဒါကနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် / cGMP လမ်းကြောင်းအပေါ်နိုက်ထရိတ်နှင့် tadalafil ပေါင်းစပ်၏ရလဒ်ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည်။ ထို့ကြောင့်, နိုက်ထရိတ်မဆိုပုံစံယူပြီးလူနာတွေကိုဒီထုတ်ကုန်တာကနေပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။
Sildenafil citrate 171599-83-0 သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောသွေးတိုးရောဂါ (PPH) ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောဆေးဖြစ်သည်။ Sildenafil သည် PDE5 ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုလူသားများအားတားဆီးနိုင်သည်။ PDE5 သည်လိင်တံရေမြှုပ်၌အလွန်မြင့်မားပြီးအခြားတစ်ရှူးများနှင့်အင်္ဂါများ၌နိမ့်သည်။ sildenafil ကိုသောက်ပြီးနောက်ဆေး၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် corpus cavernosum vasomotor ကြွက်သားသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသွေးစီးဆင်းမှုတိုးလာသည်။ cavernous ခန္ဓာကိုယ်သည်သိပ်သည်းဆနှင့်လိင်တံကိုစိုက်ထူပြီး Penile erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်ကုထုံးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
penile erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာ (လက်တွေ့ဒေတာ 27 နှင့် 12 မိနစ်အကြားဖြန့်ဝေနေကြသည်) ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် 70 မိနစ်အရေးယူပျမ်းမျှကြာချိန်ရှိသည်။
Vardenafil 224785-91-5 penile erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးအမျိုးအစား5phosphodiesterase (PDE5) inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိရောက်စွာစိုက်ထူ၏အရည်အသွေးနှင့်ကြာချိန်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအထီးလူနာများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုနှုန်းမှာတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ penile စိုက်ထူ၏ကနဦးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုဏ်ဂူချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ်များ၏အပန်းဖြေဖို့ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆက်ဆံဖို့ကိုအသုံးပြုထားကြောင်းအပြင်, vardenafil လည်းအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်တားဆီးနိုင်ပါတယ်။
Avanafil 330784-47-9 erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုတွင်အသုံးပြု PDE-5 inhibitors ၏အုပ်စုအနေဖြင့်တစ်ဦးဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ Vardenafil ဆေးခန်း phosphodiesterase5(PDE5) inhibitor ၏မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်သက်သေပြလျက်ရှိသည်နှင့် vardenafil Hydrochloride, အလွန်အမင်းအစွမ်းထက်မြင့်မားရွေးချယ်, ကောင်းစွာဒဏ်ခံဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ထွန်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ၏ကုသမှုများအတွက်အသစ်ကရွေးချယ်စရာဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။
Cialis 20mg အလုပ်လုပ်ဘို့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးယူပါသလဲ?
PDE-5 inhibitors ၏သက်ရောက်မှုလိင်စိတ်နိုးထလိုအပ်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီထိရောက်မှုနှင့်သည်းခံစိတ်ပေါ် မူတည်. ဆေးထိုး 200 မီလီဂရမ်ဦးရေအများဆုံးတိုးမြှင်စေခြင်းငှါသို့မဟုတ် 50 မီလီဂရမ်လျှော့ချ။ အခြားအ PDE-5 inhibitors နဲ့နှိုင်းယှဉ်, phosphodiesterase-5 (PDE-5) အတွက် avanafil တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားကို select ပိုကောင်းသည်းခံစိတ်မှုကိုပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Zydena (Udenafil 268203-93-6), (Dong-တစ်ဦးက Pharm ဖြင့်ဖြစ်စေ) တောင်ကိုရီးယားမှာဖွံ့ဖြိုးပြီး 2005 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Udenafil တစ် PDE-5 inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ Zydena ထိုကဲ့သို့သောမှုန်ဝါးရူပါရုံကဲ့သို့အလေးအနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတို့အတွက်လုံခြုံမူးယစ်ဆေးစဉ်းစားသည်, အဘယ်သူမျှမလေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးယခုအချိန်အထိတွေ့ပါပြီ။ သောကနိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ဤမျှလောက်များစွာသောလေ့လာမှုတွေရှိနေကြသည်မဟုတ်။ 30 မိနစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုယူနိုင်ရန်ဆေးတစ်လက်များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ထည့်သွင်းသည့်, ထိုသောက်သုံးသောပုံစံ contraindications, လုပ်ဆောင်ချက်၏ mode ကို Viagra ညီမျှကြသည်။
Flibanserin 147359-76-0 သည်စိတ်ကျရောဂါကုသမှုအတွက်မူလတီထွင်ထားသောဆေးဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤဒေသတွင်ထိရောက်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ယခုအမျိုးသမီးများသည် hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (HSDD) ကုသမှုကိုအမျိုးသမီးများအတွက်ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ထိရောက်မှု ဤနေရာတွင်အတည်မပြုရသေးပါက flibanserin (Addyi) နှင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအငြင်းပွားစရာများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
aasraw ။ ကောက်ယူသည့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့ com ကပစ္စည်းဥစ္စာရလဒ်များအရအိပ်ယာတစ်ဦးကျိုးနွံပေမယ်ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာထိရောက်မှုနှင့်အတူကနှိုင်းယှဉ်, တစ်လ၏ကာလအတွင်း 0.5 နှင့် 1 အကြားအောင်မြင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ၏နံပါတ်တိုးတက်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ လေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့သောမိန်းမ2နှင့်3ကျေနပ်လစဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများအကြားပျမ်းမျှအတူကစတင်ခဲ့သည်။
လုပ်ဆောင်ချက် Flibanserin HCL ယန္တရားတစ်ခုကို excitatory နှင့် inhibitory နှစ်ဦးစလုံး neurotransmitter လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ပြုမူ။ serotonin ၏ 5-HT 1A receptors တခုတခုအပေါ်မှာ agonist အရေးယူမှုအမျိုးမျိုးလက္ခဏာမူးယစ်ဆေးကြောင့်ဆင်တူနေတဲ့ယန္တရားမှတဆင့်နှင့် 5-HT 2A receptors တစ်ဦးရန်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့်.
အဆိုပါ dapoxetine HCL 119356-77-3 အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုတဲ့မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရေတိုကြာချိန်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်လေ့လာမှုအခွအေန၏အခြေခံတွင်, သုတ်ရည်လွှတ်၏ intravaginal အောင်းနေချိန်ကာလတစ်ဖို့ three- လေးခြံအချိန်ကြာမြင့်စွာယူဆနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, dapoxetine လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အထီးသုတ်ရည်လွှတ်ကျော်ရိပ်မိထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်စေခြင်း, ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့လူ့အခက်အခဲများလျော့ချပေးနိုင်သည်။
Dyclonin HCL 536-43-6 ဆေးပညာဆိုင်ရာစာမေးပွဲနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမတိုင်မီချွဲအမြှေးပါး၏မေ့ဆေးအတွက်အသုံးပြုရနိုင်မယ့်လိမ်းထုံဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစလည်ချောင်းနှင့်လည်ချောင်းဧရိယာများအတွက် lozenges နှင့်မှုန်ရေမွှားများတွင်တွေ့ရှိရပါသည်။ Dyclonin ကိုလည်းပေးနေရတာကိုတုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒီထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအာရုံကြောသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှု၏ဂီယာပိတ်ဆို့ touch နှင့်နာကျင်မှုများအသိတားစီးနှင့် analgesic, အရေပြားပေါ် antipruritic နှင့်တီးရီးယားရောဂါပိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီထုတ်ကုန်တစ်ခုမွှေးကြိုင် ketone type ကိုဒေသခံထုံဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစာရှောင်ခြင်းစတင်ခြင်းရှိပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်ခံသည်။ ဒါဟာအရေပြားပေါ်တွင် antipruritic analgesic နဲ့တီးရီးယားရောဂါပိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကလိင်မူးယစ်ဆေးအချို့ကိုသင်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ခဏတစ်လှုံ့ဆော်ယူပြီးပြီးနောက်, သင့်ပြဿနာနေဆဲဖြေရှင်းမပေးလျှင်မည်သို့ပင်, သင်၏ပြဿနာဖော်ထုတ်တဲ့ professional (sexologist သို့မဟုတ်ဆရာဝန်) တိုင်ပင်ဖို့တှနျ့ဆုတျပါဘူး။ အဆုံးစွန်သောကြောင့်စစ်တိုက်ခြင်းငှါသငျသညျအကွံဉာဏျနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုငါပေးမည်။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးလိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအသေးစိတ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးလိင်မူးယစ်ဆေးဝါး၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည်: ၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကလူပျော်စရာရှိသည်ဖို့ကူညီဖို့ရန်။ ဒီသည်အကောင့်ထဲသို့သောက်သုံးသောယူသင်တန်းကအရေးကြီးတယ်ထုတ်ကုန်သေတ္တာပေါ်ညွှန်ပြပေမယ့်သင်ကလေးစားလျှင်, သင်၏လိင်စိတ်သာတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်နှင့်သင့်အစီရင်ခံစာများအဘို့အလိုဆန္ဒသာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည်စိုက်ထူခြင်းပြfaceနာနှင့်ရင်ဆိုင်ရပါကလိင်မူးယစ်ဆေးဝါးသည်၎င်းအားသင့်ကိုတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ဒီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအပြင်သင်ဟာပြည့်ဝစုံလင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုရှာဖွေပြီးလုပ်ရပ်အတွင်းမှာ“ ပြိုကွဲခြင်း” ကိုမကြောက်ဘဲသင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်မှာစိတ်ရှုပ်စရာနှင့်ရှက်စရာကောင်းသောခံစားမှု။
အမျိုးသမီးများဖြစ်စေမယ့်ပိတ်ဆို့ဖို့ကိုယ်ခံစွမ်းအားမရှိကြပေ။ တနည်းကား, ဤပြဿနာကိုတိုက်ဖျက်ဖို့, တစ်ဦးလိင်မူးယစ်တာစိတ်ဝင်စားဖို့နိုင်ပါတယ်။ ဒီနောက်ဆုံးမင်းသမီးနှင့်အတူ, သင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်ထွက်သရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသင်ပိုမိုပွညျ့စုံစခံစားမိပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျပြင်းထန်သောလိင်ဆက်ဆံချင်ပါသလား? သင်သည်သင်၏လုပ်ရပ်များကာလအတွင်းအပျော်အပါးရှာတွေ့၏အိပ်မက်မက်သလား? တစ်ဦးကလိင်မူးယစ်ဆေးအဲဒီခံစားချက်တွေကိုပြန်လည်ကူညီနိုငျပါသညျ! ဒီထုတ်ကုန်လူအဖြစ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပြင်းထန်သောလိင်အသက်ရှင်နေထိုင်လိုသောနဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေများအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုသောအားဖြင့်ယူနိုင်ပါတယ်။
လိင်မူးယစ်ဆေးယူပြီး သို့ဖြစ်. သင်၏ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုပြီးပြည့်စုံသောထက်ပိုပါလိမ့်မည်, အကြီးအအကူအညီနှငျ့သူ့ကိုမှကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်လိမ့်မည်!
ဘဝတွင်ယောက်ျားသို့မဟုတ်မိန်းမသည်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်မရှိတော့သည့်အချိန်များရှိနိုင်သည်။ ဤပြproblemနာသည်များသောအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြandနာများဖြစ်သောကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြproblemsနာများ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
အဲဒီနှစျခုခံစားချက်တွေကိုပြန်လည်စေရန်, လိင်မူးယစ်ဆေးယူပြီးထိရောက်သောနိုင်ပါတယ်။ အမှန်မှာကသင်သည်သင်၏လိင်စိတ်မြှင့်တင်ရန်ကူညီခြင်းနှင့်အချို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်ပြန်လည်နိုငျပါသညျ!
လောလောဆယ်စျေးကွက်အပေါ်လူအမြားအပွားလိင်စိတ်ကြွဆေးရှိပါတယ်။ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးဝယ်ယူခက်ခဲဖြစ်ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုဤအမျိုးစုံရွေးချယ်မှု၏မျက်နှာကိုအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရရှာတွေ့မှအဆန်းမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၏ကြွင်းသောအရာ၌ငါသင်သေချာဘို့သင့်လိင်စိတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအတော်ကြာထိရောက်သောလိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများပေး!
သို့သော်သင်သည်ထိုသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမတိုင်မီလုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာကသင်၏ဆရာဝန်စကားပြောကြောင်းကိုငါသိ၏။ တစ်လှုံ့ဆော်ယူပြီးလိုအပ်သောလျှင်ကြောင့်ကျန်းမာရေးသင့်ရဲ့ယေဘုယျပြည်နယ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်လိုလျှင်ဤသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထိုကဲ့သို့သော Viagra သို့မဟုတ် Vialis အဖြစ်စက်မှုဇုန်လိင်စိတ်ကြွဆေးအများစုကိုသာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးညွှန်းအပေါ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ရရှိရန်ဆန္ဒရှိလျှင် သို့ဖြစ်. သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်အောက်တွင်တင်ဆက်မတူညီသောထုတ်ကုန် aphrodisiacs မရှိကြပေ။ သူတို့ကသင့်ရဲ့လိင်စိတ်တိုးမြှင့်ဖို့ရှိနေကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်သင့်ရဲ့လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးသင့်လျော်စိုက်ထူရစောင့်ရှောက်ရန်သင့်လိင်တံသို့တိုက်ရိုက်သွေးစီးဆင်းမှုတိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
ဤရွေ့ကားစိတ်ကြွဆေးသော်လည်းမကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲ, သင်ကကျေနပ်စိုက်ထူရှိသည်ဖို့ကူညီပေးပါမည်။ ကရာအရပ်ကိုယူဘို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွရာဌာန၌ခံရမည်ရပါလိမ့်မယ်။
12837 Views စာ
MAGL inhibitor နှင့် FAAH တားစီး: JW-642 & OL-135 & PF-7507၏စျေးကွက်အတွက် 2021 အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)